Sarotra ho azy ireo ny ho madio raha tsy mifanaraka amin'ny toe-batany ny fotodrafitrasa atao
Nofaranana teny Mahitsy ny sabotsy 16 oktobra lasa teo ny fanentanana natao tamin’ireo kaominina 14. Nentina nampahafantarana ny fahasahiranana mahazo ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy bevohoka manoloana ireo trano fivoahana tsy mifanaraka amin’ny toe-batan’izy ireo, ary koa ny fantsakana lavitry ny trano.
15 oktobra, andron’ny fanasan-tanana
Eo am-pelatanantsika ny ho avy no hevitra fanentanana
Ny 15 oktobra dia natokana ho andro fanamarihana ny fanasana tanana. Efa nampiana hoe fanasana tanana amin’ny rano sy savony izy io. Notontosaina teo Analakely ny zoma 15 oktobra 2021 ny fankalazana nasionaly ho an’i Madagasikara.
Fotodrafitrasa mety amin’ny rehetra no tokony haorina
Teny Ambohidratrimo, ny sabotsy 9 oktobra lasa teo no nanaovan’ireo mpanentana amin’ny tetikasa Veni na Vovonana ekentsika iaina mendrika sy salama, tetikasa iray tontosain’ny WaterAid, ny fanentanana faha 13 amin’ny 14 ataon’izy ireo.